ရွှေနိုင်ငံ: ပညာရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသည့် ပါကစ္စတန် နောက်ထပ် မိန်းကလေး တစ်ဦး ခြိမ်းခြောက်ခံရ
ပညာရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသည့် ပါကစ္စတန် နောက်ထပ် မိန်းကလေး တစ်ဦး ခြိမ်းခြောက်ခံရ
မိန်းကလေးများ တန်းတူပညာ သင်ခွင့်အတွက် တက်ကြွ လှုပ်ရှားကာ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး အယူ အဆကို လူသိရှင်ကြား ဝေဖန်ရဲသော တာလီဘန် ကြီးစိုးရာ ပါကစ္စတန်ဆွတ်တောင်ကြား ဒေသသူ မိန်း ကလေး တစ်ဦးကို တာလီ ဘန်စစ်သွေးကြွများက ချောင်းမြောင်း ပစ်ခတ် လုပ်ကြံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့ နေရာ အနှံ့က ဝေဖန် ရှုတ်ချမှုများ များပြားနေစဉ် ပညာသင်ခွင့်တက်ကြွ လှုပ်ရှားသည့် အဆို ပါ တောင်ကြားသူ နောက်ထပ် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို တာလီဘန်က သုတ်သင်မည်ဟု ခြိမ်း ခြောက်မှုများ ထွက်ပေါ်လာပြန်ကြောင်း Telegraph သတင်းစာ ကရေးသားဖော် ပြထားသည်။
ဟီနာခန်းဆိုသူ ပညာသင်ခွင့် လိုလားသော နောက်ထပ်မိန်းကလေးကို လည်း ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိ လာသော ကြောင့် အစိုးရမှ လုံခြုံရေး ပေးပါရန် အဆိုပါ မိန်းကလေး၏ မိဘများကပန် ကြားထားသည်။ တိုက်ခိုက် ခံရသော မာလာလာ ယူဆက်ဖ်ဇိုင်း ကဲ့သို့ပင် ဟီနာခန်း သည်လည်း တောင်ကြားဒေသ တွင် ၁၃ နှစ် သမီး က တည်းက အမျိုးသမီးများ တန်းတူ ပညာသင်ခွင့် အတွက် လှုပ်ရှားနေခဲ့သူဖြစ်သည်။
"ကျောင်းလည်း သွားလို့မရဘူး။ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ကိုလည်း ထွက်လို့ မရ ဘူး။ ဒီခြိမ်းခြောက် မှုတွေ ဖြစ်လာက တည်းက ဈေးတောင် ရဲရဲ မသွားရဲဘူး။ ဘုရားရှင် ဆီမှာပဲ အဆင်ပြေစေကြောင်း ဆုေ တာင်း နေရတော့တာပဲ" ဟု ဟီနာ ခန်းက သူ၏ နေအိမ်အခန်းငယ်တစ်ခု တွင် Telegraph သတင်းစာ ကို ပြော ကြားသည်။
သူ့နေအိမ်အခန်း အတွင်းဝယ် ပညာသင်ယူခွင့်နှင့် ပတ်သက်သော လှုပ်ရှားမှု ပိုစတာများ ကပ်ထား သည်ကို တွေ့ရသည်။ မာလာလာယူဆွပ်ဖ်ဇိုင်း လုပ်ကြံ တိုက်ခိုက် ခံရသည့်နေ့က ဟီနာ ခန်း၏ အစ္စလာမ် မာဘတ်ရှိ နေအိမ် ခြံတံခါးကို စပရေးဖြင့် ကြက်ခြေခတ်ပုံ သဏ္ဌာန် လာရောက် ရေးဆွဲသွားခဲ့သည် ကိုတွေ့ ရသည်။ တယ်လီဖုန်းဖြင့်လည်း ဆက်၍ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိနေသည်ဟု ၄င်း၏ မိဘများ က ပြောကြား သည်။
"အမှတ်အသားကိုပဲ မင်းတို့ ဖျက်ပစ်လို့ရမယ်။ မင်းတို့ကတော့ ငါတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ပဲလို့ ဖုန်း ဆက်ပြီး ပြော ဆိုနေ ပါတယ်" ဟု ဟီနာခန်း၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ရာယာတူလာခန်းက ပြောကြားသည်။
မစ္စတာခန်းသည်လည်း ပါကစ္စတန် အခြေစိုက် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဖိအားပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ဟီနာမိခင် သည်လည်း တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦး ပင် ဖြစ် ကာ တောင်ကြားဒေသမှ အမျိုးသမီးများ ဘဝ တိုးတက် မြင့်မားရေး အတွက် ဒေသ ထွက်ပစ္စည်း များ ရောင်း ချ ပြသခြင်း၊ သင်တန်းပေး ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့၏။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 12:34
ဆီမီးမျှောပွဲ သွားရောက်စဉ် တံတားကျိုးကျ
ကေအိုင်အိုနှင့် နိုင်ငံရေး အရ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် သေ...
ဆွစ်ဇာလန်သံရုံး ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်မည်
ဆံပင်မွေးနှင့် အလင်းပေးသူ ဆယ်ကျော်သက် နီပေါနိုင်ငံ...
ကချင်စစ်ရေးတွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က သမ္မတ အမိန့်က...
မနန်းဝိုးဖန်၏ခင်ပွန်း အာမခံ ငြင်းပယ်ခံရ -
KIO နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ
ပညာရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသည့် ပါကစ္စတန် နောက်ထပ် မိန်းက...
ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်င...
Breaking News - နူးယောက်ခ်မြို့မှ ဇိမ်ခံမိုးမျှော်...
Breaking News - နူးယောက်ခ်မြို့တွင်း ရေပြည့်ရေလျှံ...